I-China amawaka amawaka ebrashi yamazinyo ayilelwe ukuba ayonzakalisi iintsini mveliso kunye nabenzi | Enyuan
amawaka amawaka ibhrashi yamazinyo eyilwe ngokuthobekileyo ayinakulimaza iintsini
Amawaka alishumi eebrashi zamazinyo zethu zisebenzisa itekhnoloji enkulu yokutsala umngxunya wesikwere, iphindwe kabini ngokuthamba okungafaniyo, yenza inzululwazi ye-cryptographic, isasaza ngobunono ukusonga amazinyo, iintsini zokuphulula, kunye noxinzelelo lwentsini
Igama lemveliso amawaka amawaka ibhrashi yamazinyo
Izinto zeBristle Intambo
Ububanzi bebrashi Ubungakanani:
Chwetheza ibrashi yabantu abadala
Ukuphucula uphando kunye nophuhliso, ezintsha ngokubanzi
Imveliso yethu iphuculwe kwaye yaphuhliswa ukugcina izithuba ezininzi zokutsala ukuhamba kwakhona. Usebenzisa itekhnoloji yokutyala eshinyeneyo enemingxuma emikhulu, icocekile kwaye ikhuselekile xa uxubha.
Isibambo sebrashi esemgangathweni
Isiphatho sebrashi esiyenzileyo sisekwe kumgaqo we-ergonomics, onokuthi ulingane nentende yesandla ngokubamba kamnandi. Kukongela abasebenzi, kubhetyebhetye kwaye kulula ukusebenzisa.
Izibonelelo zeMveliso; amawaka alishumi oxinwano oluphezulu kunye neebristles ezentofontofo, ukusebenza okuphezulu kunye nemisebenzi emininzi, ukunambitheka komqhaphu, imicu yebrashi ecocekileyo, encinci njenge-0.127mm. Ithambe kwaye ithambe ngokuthambileyo, ithambile, isonge amazinyo, uthambise iintsini ngaphandle kokulimaza iintsini. Intloko yebrashi iyandiswa ukuze yandise indawo yokudibana nomhlaba wamazinyo, kwaye ukucoca kunendawo.
Amanyathelo okhuseleko ekusebenziseni ibrashi yamazinyoUkuzinza kwebrashi yamazinyo kunye nempilo yakho, khumbula ukomisa ibrashi yamazinyo ngalo lonke ixesha uhlamba amazinyo. Emva kokusebenzisa ibrashi kangangexesha elithile, iya kuqokelela inani elikhulu leentsholongwane, ifungi kunye nezinto ezincinci. Emva kokuxubha amazinyo, beka ibrashi yamazinyo phantsi kwetephu kwaye uyihlukuhle ngamandla ukuze uyicoca, emva koko usete ibrashi yamazinyo ukuba yome. Xa ubeka iibrashi zamazinyo ezininzi, musa ukuchukumisana ukuthintela intsholongwane ebandayo okanye yomkhuhlane ekusasazeni ngeebrashi zamazinyo. Ukufaka ishelufu ekhayeni elinokubeka iibrashi zamazinyo ezininzi ngokuthe nkqo akubizi mali ininzi, kodwa kulungile kwimpilo yosapho lonke.
Egqithileyo Umgangatho ophezulu wasekhaya nano ibhrashi yamakhaya
Okulandelayo: Isibini semisonto ethambile ibristles ibhrashi yamazinyo
i-oem ithambile ibrashi encinci yebhrashi yentloko